diary | HoLOLo....DiLoLO | Page 2
ဟိုလို ဒီလိုတွေ မင်းသိပ်မလုပ်နဲ့… ကောင်မလေး မင်းသိပ်ရှုပ်တယ်… နေပူလှန်းထားတတ်တယ်..
အချိန်တွေကုန်လာပြီ.. ငါလုံးဝနှမြောတယ်.. ငါလေလုံးဝမောတယ်…..
ဟင်း.. ငါ့များစောင်းဆိုသလား မှတ်ရတယ်.. ဒီသီချင်းကလည်း နော်..
Japanese Language Proficiency Test(JLPT)ကလည်း ဒီဇင်ဘာ ၆ရက်နေ့ ဖြေရမယ်၊ တစ်နှစ်နီးပါးလေ့လာထားပြီး စာမေးပွဲကျပြန်ရင် အရှက်ကကွဲဦးမယ်။
အလုပ်တွေကလည်း အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာမှ များလိုက်တာ။ ဖတ်ဖတ်ကိုမော၊ ရင်ဘတ်နောက်ကကျောပဲ။
စာကျက်ခြင်းအမှုကိစ္စကို နိုဝင်ဘာတစ်လလုံး ဖိဖိစီးစီးလုပ်ပါမယ် ဆိုနေကာမှ…….
မပြန်မဖြစ်နဲ့ ဇာတိချက်ကြွေ မော်လမြိုင်မြေကို ပြန်သွားရသေးတယ်။ ၃နှစ်လောက် မရောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ရသလောက်အချိန်အတွင်း ရနိုင်သမျှ သူငယ်ချင်းနဲ့တွေ့၊ စားချင်တာတွေ လိုက်စား၊ ဓါတ်ပုံတွေလည်း ရိုက်ခဲ့သေးတယ်။ လိုင်းကား ဆွဲနေတဲ့ ချက်ပလက် ကားကြီးတွေ၊ တောင်ပေါ်ကလှမ်းမြင်တဲ့ ရှုခင်းတွေ၊ သံလွင်တံတားကြီး၊ စာမေးပွဲပြီးမှပဲ ဓါတ်ပုံတွေ တင်တော့မယ်။
ပြန်လာတော့လည်း ဧည့်သည်တွေက ပါလာပြန်ရော။ တစ်ယောက်တည်းပဲ စာကျက်တတ်တော့ ဒုက္ခရောက်ရော၊ ဧည့်သည်တွေရှိတော့ စာမကျက်ဖြစ်၊ ဘာမှလည်း မလုပ်ဖြစ်၊ နဂိုကလည်း မကျက်ထား။ ရွှေ့ထားတာ မှန်သမျှ ဘယ်ဟာမှ မကောင်းပါလား။ ခု ကြည့်လေ.. စာကျက်ဖို့ကို အရွှေ့ကောင်းလို့ ကျက်မယ်ဆိုတော့ အားကိုမအားတော့ဘူး. အချိန်ရှိတုန်း မလုပ်ဘဲနဲ့။ ပြောသာပြောရတယ်.. အမြဲဒီအတိုင်းပါပဲ။
အိမ်ပြန်တာနဲ့ အလုပ်ရှုပ်တာနဲ့ ကြားထဲက၊ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင် မကောင်းတဲ့ အရပ်ဒေသကို ရောက်နေပြန်ရော.. ဟင်း.. ဘယ်တွေ ဘယ်လိုဖြစ်လို့.. ဘာတွေလုပ်နေကြမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ ဧရိယာပြင်ပရောက်ပုံများ။ မေးလ်လေးတောင်မှ မစစ်ဖြစ်သလောက်ပဲ။
တခြားကိစ္စ၀ိစ္စတွေ အားလုံးခဏရပ်။ နှစ်ပတ်လောက် စာပဲလုပ်လိုက်ဦးမယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၆၊ စာမေးပွဲပြီးမှ ………………………….
November 20, 2009 by hololodilolo	diary	6 Comments
Aprilလ 11ရက်နေ့ကစ 21ရက်နေ့အထိဖြစ်တဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အရှည်ဆုံးသော အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ကြီးရောက်လာပြန်ပါပြီ။ ကိုယ်စီကိုယ်စီ သူ့အစီအစဉ်နဲ့သူ ဖြစ်နေလောက်ပါပြီ။ ကျွန်မရော.. ။ ရှိတာပေါ့။
(၁) စာကျက်မယ်။ မေလမှာ ပြန်တက်ရမယ့် အတန်းမှာ စာလိုက်နိုင်အောင် ပေါ့ပေါ့လျော့လျော့ နေထားတဲ့စာတွေကို ပြန်ကျက်ရမယ်။
(၂) စာဖတ်မယ်။ စာမဖတ်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာပြီ။ ebook တော့မဖတ်ချင်ဘူး။ စုထားတဲ့ စာအုပ်တွေဖတ်ရမယ်။ အများကြီးရှိတယ်။
အားလုံးပဲ သင်္ကြန်ကာလအတွင်းမှာ အန္တာရယ်ကင်းကင်းနဲ့ ပျော်နိုင်ကြပါစေ။
April 10, 2009 by hololodilolo	diary	4 Comments
ကျွန်မခုတလော စာတွေလည်းမရေးဖြစ်သလို ဖတ်လည်းမဖတ်ဖြစ်ဘူး။ အပျင်းပိုးလေး ဖြစ်နေတာ။
ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလေးကိုလည်း banner ကအစ ပြန်ပြောင်းမယ် စဉ်းစားထားပေမယ့် ထိကိုမထိဖြစ်ဘူး။ ခုထားထားတဲ့ banner ကလည်း ယာယီဆိုပြီး ထည့်ထားတာ။ ပြီးမှ ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုတာ နှစ်တောင်ပေါက်တော့မယ်။ blogspot ကလည်းဝင်ရတာ လက်ပေါက်ကတ်တယ်။ ခုနောက်ပိုင်းဆို ကိုယ့်ရဲ့ dashboard ထိတောင် မရောက်တောင် တော်တော်ကြာနေပါပြီ။ အားလုံး mail to blogger ပဲလုပ်နေတာ။ တင်ထာတဲ့ စာတွေလည်း alignment တွေ မညီတာ ဒီအတိုင်း ထိုင်ကြည့်နေဖြစ်တယ်။ cbox မှာ နှုတ်ဆက်တဲ့သူ ပိုပို ရှားလာတာ။ visitor count မတက်လာတာတွေကိုတော့ မသိချင်ယောင်ပဲ ဆောင်ထားတော့တယ်။ အရင်က အသားကုန်ဖတ်ဖြစ်တဲ့ blog တွေကိုလည်း google reader လေးအားကိုးနဲ့ပဲ တိတ်တဆိတ် ဖတ်ဖြစ်တော့တယ်။
ကျွန်မက စာရေးချင်လို့ blog ရေးတာပါ။ ခုတော့အဲဒီ sense လေးပါ ပျောက်နေတယ်။ ညဘက်ကျ ကဗျာလေးတပိုင်းတစ စဉ်းစားမိလိုက် ပြန်ပြန်ပျောက်သွားလိုက်နဲ့။ စာတွေမဖတ်ဖြစ်တာလည်း ပါလိမ့်မယ်။ အင်း မအိပ်ခင် စာအုပ်ဖတ်ပြီး အိပ်တဲ့အကျင့်လေး ပြန်လုပ်ဦးမှ။ အိပ်မပျော်မှာကြောက်တာနဲ့ပဲ စာမဖတ်ဖြစ်တာကြာပြီ။ ပြန်လုပ်ဦးမှပါ။
January 22, 2009 by hololodilolo	diary	6 Comments
အေးတယ်။ ခံစားချက်တွေရော။ အားလုံး။
၀ိုင်းဝိုင်းရဲ့ အိမ်လွမ်းသူ သီချင်းပဲ နားထဲကြားယောင်တယ်။
December 23, 2008 by hololodilolo	diary	Leaveacomment